Uma ungazi ukuthi ungashintsha kanjani igama elithi "VKontakte", ke lesi sihloko yilokho okudingayo.
Kungani sicabanga ngisho nangokushintsha igama? Cishe, uma ubhalisiwe kule nethiwekhi yezenhlalo, ukhetha isidlaliso esihle noma esingajwayelekile. Lokhu kuyaqondakala: abantu abaningi banesimo esinjalo, ngoba eminyakeni embalwa eyedlule akekho umuntu owakucabangela ukuthi lolu lwazi luzobathandwa kanjani. Manje, lapho cishe wonke umuntu waseRussia (futhi nase-Ukraine, eBelarus, e-Kazakhstan nakwamanye amazwe) enekhasi lakhe "elibukhoma" elinabangane abaningi nabajwayele, abaningi bafuna ukushintsha igama elithi "VKontakte" kuze kube manje.
Eqinisweni, kusukela ekubukeni kokusebenza, akunzima kakhulu ukwenza lokhu. Inkinga enkulu ukulinganisa igama elisha ngabaqondisi besayithi.
Ungashintsha kanjani igama elithi "VKontakte": imibuzo yobuchwepheshe
Ukuze ushintshe igama, okokuqala yiya ekhasini lakho. Ngokuqhubeka ngaphansi kwe-avatar, khetha ingxenye ethi "Hlela ikhasi". Imenyu izovuleka, ngesigaba sokuqala - "Isiyisisekelo" - ekhethiwe ngokuzenzakalelayo. Nje lapha ungashintsha igama elithi "VKontakte." Izinguquko zingenziwa kokubili egameni nasesibongo, noma ungalungisa zombili izinkambu ngesikhathi esisodwa.
Uke wakwenza? Ingabe uqinisekile ukuthi awufuni ukushintsha igama futhi? Bese uchofoza inkinobho ethi "Gcina". Konke! Igama lakho elisha lithunyelwe ukulinganisela, lihlala nje ukulinda ngesineke. Ngokuvamile, abasebenzisi bazofunda ngesinqumo sabaphathi ngemuva kwamahora ambalwa noma izinsuku. Lesi sinqumo sincike kusiphi? Ake siyiqonde.
Ungashintsha kanjani igama elithi "VKontakte": imithetho yomengameli
Uma kwenzeka ngaphambi kokuba igama lakho lesiteketiso lenze okuthi "Shchastlivyj Yozhig", futhi manje wanquma ukuguqula igama lakho lesipasipoti nesibongo, bese izinkinga akufanele ziphakame. Ukuphathwa kwesayithi, yebo, kukhuthaza amagama angewona ama-industrial, izithombe zangempela nolwazi olunokwethenjelwa. Ngamagama, abahloli "VKontakte" ngokumelene nokubuswa kwama-akhawunti amanga.
Esimweni esifanayo, uma isimo sinjalo ngokuphambene, okungukuthi, unalo igama langempela, futhi ngesizathu esithile ufuna ukuwuguqula kube inkohliso, ngakho-ke awukho cishe amathuba. Ungazama ukushintsha isibongo. Akunjalo ngesiRussia: funa i-intanethi ngamagama amaNgisi, amaFulentshi noma amaScandinavia amahle. Kuyinto efiselekayo ukuthi ibukeke njengeRussified, okungukuthi, labo abayifanele ukuhlangana eRussia (isibonelo, Schneider, Kronberg). Kungenzeka ukuthi omengameli bazohlangana nawe, banquma ukuthi kungenzeka ushada (uma uyintombazane) noma ushintshe isibongo sakho empilweni yangempela.
Uma kwenzeka ube nesiteketiso sokungathembeki ngokuqondile, ofuna ukuguqula esicacisayo, kodwa kufana negama langempela, amathuba akho akhula kakhulu.
Khumbula ukuthi ukwenqaba ukushintsha igama lakho akuyona "eyingozi" ekuphathweni, kodwa kunakekelwa ngabanye abasebenzisi. Iqiniso liwukuthi kusukela kuma-fake ama-akhawunti ama-fake, okuqukethwe kwezingcolile kanye nobuzwe ngokuvamile kuhanjiswa.
Hhayi, khona! Manje uyazi ukuthi ungashintsha kanjani igama elithi "VKontakte." Empeleni, akukho lutho oluyinkimbinkimbi kulokhu. Kuningi kuxhomeke ukuthi yiyiphi i-moderators ezothola isicelo sakho sokushintsha igama. Inhlanhla!
Biography Elena Proklova, actress kanye umngenisi wezihambi enkulu
Kanjani ukuze kukhawulwe ijubane-Inthanethi